Mkpughe 22 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
22 O wee gosi m osimiri nke mmiri nke ndụ,+ nke na-egbuke egbuke dị ka kristal, ka o si n’ocheeze Chineke na nke Nwa Atụrụ+ ahụ na-asọpụta,
2 na-asọda n’etiti mbara okporo ámá ya. E nwere osisi+ nke ndụ n’otu akụkụ nke osimiri ahụ nakwa n’akụkụ ya nke ọzọ. Ha na-amị mkpụrụ ugboro iri na abụọ n’afọ, ha na-amị mkpụrụ ha kwa ọnwa.+ Akwụkwọ nke osisi ndị ahụ bụ maka ịgwọ mba niile.+
3 A gakwaghị enwe ọbụbụ ọnụ ọ bụla.+ Ma ocheeze Chineke+ na nke Nwa Atụrụ+ ahụ ga-adị n’obodo ahụ, ndị ohu ya ga na-ejekwara ya ozi dị nsọ;+
4 ha ga-ahụkwa ihu ya,+ aha ya ga-adịkwa n’egedege ihu ha.+
5 Abalị agaghị adịkwa ọzọ,+ ìhè oriọna adịghịkwa ha mkpa, ha enweghịkwa ìhè anyanwụ, n’ihi na Jehova Chineke ga-enye ha ìhè,+ ha ga-achịkwa dị ka ndị eze ruo mgbe niile ebighị ebi.+
6 O wee sị m: “Okwu ndị a kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa eziokwu;+ ee, Jehova, bụ́ Chineke nke mere ka ndị amụma+ kwuo okwu site n’ike mmụọ nsọ,+ zigara mmụọ ozi ya igosi ndị ohu ya ihe ndị na-aghaghị ime n’oge na-adịghị anya.+
7 Lee! ana m abịa ọsọ ọsọ.+ Obi ụtọ na-adịrị onye ọ bụla nke na-edebe okwu amụma nke dị n’akwụkwọ mpịakọta a.”+
8 Ọ bụ mụ onwe m bụ́ Jọn na-anụ ma na-ahụ ihe ndị a. Mgbe m nụkwara ma hụ ihe ndị a, adara m n’ala n’ụkwụ mmụọ ozi nke nọ na-egosi m ihe ndị a ka m fee ya ofufe.+
9 Ma ọ gwara m, sị: “Kpachara anya! Emela ya! Abụ m naanị ohu ibe gị na ohu ụmụnna gị bụ́ ndị amụma,+ nakwa ohu ndị na-edebe okwu nke dị n’akwụkwọ mpịakọta a. Fee Chineke.”+
10 Ọ sịkwara m: “Akala okwu amụma dị n’akwụkwọ mpịakọta a akara, n’ihi na oge ahụ a kara aka dị nso.+
11 Onye na-eme ajọ omume, ya nọgide na-eme ajọ omume;+ ka e meekwa ka onye ruru unyi nọgide na-eru unyi;+ ma ka onye ezi omume+ nọgide na-eme ezi omume, ka e meekwa ka onye dị nsọ nọgide na-adị nsọ.+
12 “‘Lee! Ana m abịa ọsọ ọsọ,+ m jikwa ụgwọ ọrụ+ m ga-enye, ka m wee nye onye ọ bụla dị ka ọrụ ya si dị.+
13 Abụ m Alfa na Omega,+ onye mbụ na onye ikpeazụ,+ mmalite na ọgwụgwụ.
14 Obi ụtọ na-adịrị ndị sara uwe mwụda ha,+ ka ha wee nwee ikike iri mkpụrụ si n’osisi nke ndụ ahụ,+ ka ha wee banyekwa n’obodo ahụ site n’ọnụ ụzọ ámá ya.+
15 N’azụ obodo ka nkịta+ na ndị na-eme mgbaasị+ na ndị na-akwa iko+ na ndị na-egbu ọchụ na ndị na-ekpere arụsị na onye ọ bụla nke nwere mmasị n’ịgha ụgha, nke na-aghakwa ụgha,+ nọ.’
16 “‘Mụ onwe m, bụ́ Jizọs, zigara mmụọ ozi m ka ọ gbaara unu àmà banyere ihe ndị a maka ọgbakọ ndị a. Abụ m mgbọrọgwụ+ Devid, bụrụkwa nwa ya.+ Abụkwa m kpakpando ụtụtụ nke na-enwu gbaa.’”+
17 Mmụọ nsọ+ na nwaanyị ahụ a na-alụ ọhụrụ+ na-asị: “Bịa!” Onye ọ bụla nke nụrụ ya, ya sịkwa: “Bịa!”+ Onye ọ bụla nke akpịrị na-akpọ nkụ, ya bịakwa;+ onye ọ bụla nke chọrọ, ya nara mmiri nke ndụ ahụ n’efu.+
18 “Ana m agbara onye ọ bụla nke na-anụ okwu amụma nke dị n’akwụkwọ mpịakọta a àmà, sị: Ọ bụrụ na onye ọ bụla atụkwasị ihe+ n’ihe ndị a, Chineke ga-atụkwasịrị ya ihe otiti+ ndị e dere n’akwụkwọ mpịakọta a;
19 ọ bụrụkwa na onye ọ bụla ewepụ ihe n’okwu dị n’akwụkwọ mpịakọta nke amụma a, Chineke ga-ewepụ òkè ya n’osisi nke ndụ+ nakwa n’obodo nsọ ahụ,+ bụ́ ihe ndị e dere banyere ha n’akwụkwọ mpịakọta a.
20 “Onye ahụ nke na-agba àmà banyere ihe ndị a na-asị, ‘Ee; ana m abịa ọsọ ọsọ.’”+
“Amen! Bịa, Onyenwe anyị Jizọs.”
21 Ka obiọma Onyenwe anyị Jizọs Kraịst nke na-erughịrị mmadụ dịnyere ndị nsọ.+